प्रेमले बनायो लेखक : अश्विनी कोइराला - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
प्रेमले बनायो लेखक : अश्विनी कोइराला
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, भदौ २७, २०७१
संसारका धेरै मानिसलाई प्रेमले साहित्यकार बनाएको छ । प्रेमले पत्रकार बनाएका उदाहरण भने निकै कम छन् । अश्विनी कोइरालालाई भने प्रेमले पत्रकार बनायो । स्कुल पढ्दा उनी एउटी किशोरी मन पराउ“थे । ती किशोरीलाई प्रेमपत्र लेख्दा लेख्दै कतिखेर लेखाई खारियो, उनैले पत्तो पाएनन् । लेखाईको शैलीबाट उनलाई कान्तिपुर पब्लिकेशनमा जागिर खाने अफर आएको हो । कान्तिपुर जस्तो प्रतिष्ठित संस्थामा जागिर खाने कारण बनेकी उनकी प्रेमीकालाई उनले अन्तरवार्ताको सुरुमै सम्झना गरे । १६ वर्षदेखि कान्तिपुरको ‘साप्ताहिक’ पत्रिकामा लेखिरहेका कोइराला भन्छन्–‘धेरैपटक कान्तिपुर दैनिकमा राजनीतिक वा आर्थिक बिटमा काम गर्ने अवसर आएको थियो, तर पत्रकार भन्दा लेखक नै बन्ने चाहनाले साप्ताहिक छाड्न सकिनँ ।’
अश्विनीले सुरुदेखि नै आम मान्छेको कथालाई आफ्नो लेखनको स्रोत बनाए । पहिलो पटक चर्चित लोग्नेका दुःखी श्रीमतीहरुको कथा छापामा ल्याउने श्रेय उनैलाई जान्छ । करिव ५ सय महिलाको अन्तरवार्ता लिएका कारण हुनसक्छ, उनलाई महिला नै ठान्ने पाठकहरुको जमात ठूलो छ । महिला ठानेरै धेरैले उनलाई प्रेमपत्र समेत पठाएका छन् र पार्टीमा समेत बोलाएका छन् । आखिर के कारण उनको लेखनको चर्चा हुने गर्छ ?
‘मेरो लेखन खासै फरक हो जस्तो त लाग्दैन, तर साधारण मानिसका कथा सतहमा ल्याउने भएकाले मानिसले मलाई याद गरेका हुन सक्छन् ।’ साधारण जीवनशैलीमा विश्वास गर्ने कोइराला भन्छन्–‘हरेक मानिसभित्र एउटा विशिष्ट कथा हुन्छ, मेरो लेखनमा उनीहरुको त्यो ब्यथा बाहिर ल्याउने प्रयत्न गर्छु ।’ उसो त स्कुल पढ्दादेखि नै उनी कथा लेख्थे । एसएलसी पास गरुन्जेलसम्म उनले २९ वटा कथा तयार पारेका थिए । त्यही कथा छपाउने लोभमा उनी विराटनगरबाट काठमाडौं उक्लेका थिए । गरिव परिवारका उनी पेट पाल्न एउटा गार्मेन्टमा काम गर्थे । त्यहीकी एउटी कामदारले उनको कथा पढ्न लगेकी थिइन् । त्यो कथा कहिलै फर्केर आएन । ‘यस्तै बर्खाको समय थियो । गार्मेन्टमा स“गै काम गर्ने युवतीले मेरा कथा पढ्दा पढ्दै झ्यालमा राखेर निदाइछिन् । राती पानी परेर त्यो कथाको कापी ल्याफ्फै भिजेछ ।’ ती कथाहरु सम्झँदै कोइराला भन्छन्–‘त्यो कथा संग्रह छापिने स्तरका थिएनन् तर त्यो घटनापछि मैले साहित्य लेख्नै सकिनँ ।’
दुई वर्षअघि उनले लिएका अन्तरवार्तामध्ये ३९ महिलाको कथा भएको ‘उनी’ पुस्तक बजारमा आयो । बजारमा यो पुस्तक अचानक चर्चित भयो । एक वर्षमै पुस्तक सात हजार प्रति बिक्री भयो । नेपाली पुस्तक बजारमा नाम चलेका साहित्यकारको पुस्तक पनि एक हजार बिक्री हुन मुस्किल परिरहेका बेलामा ‘उनी’ ले बजार तताएपछि उनको साहित्यिक तिर्खा पनि अचानक बढेर आएको छ । यहि तिर्खा मेटाउन उनी अहिले ‘जुकरवर्ग क्याफे’ कथा संग्रह बजारमा ल्याउ“दैछन् । ‘उनीले सर्वत्र प्रसंसा पाएपछि मैले आफ्नो साहित्यिक व्यक्तित्वलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हु“ । अब वास्तविक साहित्यक यात्रा सुरु भएको छ’, कोइराला भन्छन्–‘हुन त साप्ताहिकमार्फत म समाज नै लेखिरहेको थिए“ तर त्यो साहित्य नै हो भनेर कसैले ठम्याउन सकेनन् । त्यसलाई चिर्न पनि साहित्य लेख्नु परेको हो ।’
शाकाहारी परिकार मनपराउने कोइराला कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा भेटिदैनन् । देखावटी गर्ने, अनावश्यक प्रचार खोज्ने सेलिब्रेटीहरु उनलाई मनपराउ“दैनन् । कतिपयले उनलाई घमन्डी पनि भन्ने गरेका छन् । कतिपयको अन्तरवार्ता लिँदालिँदै उनलाई अयोग्य ठानेर फर्किएका छन् । कतिपयको छापिन लागेको अन्तरवार्ता पनि पत्रिकाबाट हटाउन लगाएका छन् । आखिर उनी किन आफूलाई फरक बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ?
‘हाम्रो समाज धेरै पाखण्डी छ । सानो काम गर्दा पनि ठूलो प्रचार खोज्छ । यस्ता मान्छेस“ग मेरो विचार मिल्दैन ।’ आफ्नो फरक जीवन शैलीका बारेमा कोइराला भन्छन्, ‘प्रतिभा पत्रकारले खोज्नुपर्छ । जो व्यक्ति म योग्य छु भन्ने ठान्छ, वास्तवमा ऊ योग्य हु“दैन भन्ने मलाई लाग्छ । यस्ता व्यक्तिहरु मलाई मनपराउ“दैनन् ।’ हुनपनि उनका धेरैसाथीहरु पार्टीमा रमाइरहेका बेला उनी ध्यान केन्द्रमा भेटिन्छन् । अरुलाई योग सिकाइरहेका हुन्छन् । अध्यात्म र जीवन जगतका बारेमा बहस गरिरहेका हुन्छन् । सायद यहि कारण उनको लेखन फरक भैकन पनि उनी समाजबाट केही अलग्गिए झैं लाग्छ । उनले कान्तिपुरले दिने आन्तरिक पुरस्कार बाहेक कुनै पुरस्कार पाएका छैनन् । यसरी कुनै पद वा पुरस्कार नपाएकोमा उनको चित्त दुखाइ पनि छैन । भन्छन्–‘हाम्रो समाज पुरस्कार दिदा पनि फाइदा हेर्छ । त्यो फाइदा म दिन सक्तिनँ, त्यसैले अपेक्षा पनि गरेको छैन ।’
कुराकानीको विट मार्दै गर्दा उनलाई सोधियो–‘तपाईं लेखक, साहित्यकार कि पत्रकार ?’ उनको जबाफ थियो–‘पत्रकारले समाज बुझेको हुन्छ, त्यसलाई कलात्मक रुपमा लेख्न सक्यो भने त्यो साहित्यकार हो, नत्र पत्रकार । साहित्यिक पत्रिका वा साहित्यिक पेजमा छापिने बित्तिकै त्यो साहित्य नहुन पनि सक्छ, तै पनि आफ्नो मूल्यांकन गर्ने जिम्मा उनले पाठकलाई नै छाडिदिए–‘म साहित्यकार हु“ कि पत्रकार, मेरा पाठकलाई नै सोध्नुपर्छ ।’